Pedal | October 2021
Isi > Pedal
Ngwunye ígwè - nzaghachi maka okwu ndị a
Gịnị ka pedal nchara pedal na-eme? A na-ejikọkarị ígwè pedal na egwu mba America. Agbakwunyere pedals na apata ụkwụ ugba na 1940, na-ekwe ka onye na-eme ihe egwu buru ibu n'emeghị ogwe ahụ yana ịkwanye pedal ahụ ka ọ na-akụ ụda, na-eme ka ndetu na-agafe ma ọ bụ na-ehulata kwekọrọ na ndetu ndị dị ugbu a.
speedplay efu chromoly pedals
Speedplay zero chromoly pedals - ajụjụ nkịtị
Ndi pedal Speedplay bara uru? Speed ​​pedal dị ezigbo mma ịnya ịnyịnya. Ha were obere nke iji (dị ka iji mmiri mmiri na ice bụ mmetụta nkịtị), mana ugbu a achọghị m ịga sistemụ ọ bụla. Ha dị mfe, pere mpe ma dị mfe iji. Ihe ndọghachi azụ Speedplay bụ na ha abụrụla nhọrọ dị oke ọnụ.
otú clipless pedals na-arụ ọrụ
Kedu otu pedal enweghị isi na - arụ ọrụ - azịza ohuru
Kedu otu pedal na-enweghị mkpụkọ na-arụ? Clipless pedals na-arụ ọrụ site na-arịgo obere plastik ma ọ bụ mpempe akwụkwọ na akpụkpọ ụkwụ gị nke na-adaba na nchịkọta nke mkpirisi mmiri na ihu nke pedal. Clipless pedals na-egosi cleats nwere nhazi 3-oghere ma ọ bụ 2-oghere.
Powertap pedals - otu esi edozi
Kedu kate ndị eji pedal PowerTap eme? P1 na pedal na-ejikọ aka na-eji ikikere, 3-bolt keo-style cleats. 0-ogo na 6-ogo float nhọrọ dị.
Kachasị mkpịsị ụkwụ - nzaghachi maka nsogbu ndị ahụ
Kedu mkpịsị ụkwụ na-adịghị mfe? 1) Shimano M324: N'etiti ndị kacha mma, kachasị mfe mkpịsị ụkwụ maka ndị na-agba ịnyịnya ọhụrụ abụọ. 2) Crank Brothers Candy 1: Nnukwu mkpịsị ụkwụ ezighi ezi maka ndị na-agba ugwu ugwu. 3) Shimano R540: Otu n'ime ụzọ ụkwụ kacha mma maka ndị mbido. 16. 2021.
Pedform Platform - olee otu I si edozi
Welche Plattformpedale MTB? Das TestfeldPedalPlattform na mm (L x B x H) PreisACROS A-FLAT MD100 x 98 x 1874,95 Crankbrothers Stamp 7100 x 100 x 11-13150 DMR Vault105 x 105 x 17130 Hope F20110 x 102 x 15155